Home » Serivisy fampandrenesana tariby » Ideal Homes Fampandrosoana manokana ao Algarve
Fampivoarana vaovao any Lagos, Algarve, vao natomboka manokana niaraka tamin'ny Ideal Homes International ary tsy hita miaraka amin'ny maso ivoho hafa any Portugal.
Ireo mpampiasa vola vahiny te-hividy trano any Portugal ho an'ny tanjona hofana fotsiny dia tokony hifandray amintsika anio mba handre ny momba ny Dona Maria II Residences sy izay valiny antenain'izy ireo ”
Any afovoan'i Lagos, Ideal Homes dia manana exclusivity amin'ity fivoarana vaovao ity izay midika fa ny mpamatsy vola vahiny liana dia tsy hahita azy io amin'ny maso ivoho trano iray hafa any Portugal.
Nomena anarana Dona Maria II Residences, ity tolotra vaovao ity efitrano malalaky ny roa sy telo miaraka amin'ny vidiny 530,000 €.
Tsy ity trano fandraisam-bahiny ity ihany no manana vinavina ROI avo fa ho an'ireo izay te-hahazo Visa Golden any Portugal, mahafeno fepetra izy ireo, manao izany ho fampiasam-bola mandresy.
Miaraka amin'ny fanokafana an'ity sombin-tany tena lehibe any Portugal ity, Ideal Homes International dia manolotra fonosana 555 ho an'ireo singa dimy voalohany novidin'ny mpampiasa vola. Ny fonosana 555 dia misy:
- petra-bola 5%
- 5% fihenam-bidy
- 5% amin'ny sarany ara-dalàna
- 5% fonosana fanaka
- fitantanana fanofana maimaim-poana 1 taona
Ireo izay te hividy trano any Algarve dia tsy hahita fifampiraharahana tsara kokoa eny an-tsena - ny fametrahana 5% amin'ny trano iray (mazàna 30%) dia mbola tsy tazana na re re tany Portiogaly ary tsy ho ela intsony.
Eo am-panamboarana ilay mpamorona mitovy amin'i Adega, ny fampandrosoana eny an-dàlana, ny mpampiasa vola izay nividy trano tany dia hahafantatra fa mamokatra trano avo lenta ny mpandrindra miaraka amin'ny Dona Maria II Residences manana toerana ambony noho ny zavatra nataony teo aloha.
Ho an'ny fampahalalana rehetra momba ny zavatra fonosin'ilay fonosana 555, vola azo amin'ny fanofana, drafitra gorodona sy maro hafa, mifandraisa amin'ny ekipa ao amin'ny Ideal Homes International anio mba hahazoana vondrona iray alohan'ny tara loatra.
Momba ny Ideal Homes International
Ideal Homes dia masoivohon'ny trano miharo loka maro, monina any Portugal, misy birao any Algarve sy Espana. Izy io dia manana laza miorina amin'ny serivisy tsara indrindra amin'ny serivisy atokisan'ny mpividy mahay sy ny mpampiasa vola mitady hividy trano fialantsasatra, trano maharitra ary fananana fampiasam-bola erak'izao tontolo izao.